ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: မင်းသိင်္ခ၏ စာအုပ်များ
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:22 PM
ahphyulay January 22, 2011 at 11:44 PM
ဒီဘက်ရာစုထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ လူထူးဆန်းတွေကိုပြပါဆိုရင်
ဆရာကြီး“ မင်းသိင်္ခ ” ကိုလဲ ပြလို့ ရမယ်ထင်တာပဲ ။
သူက သူယုံကြည်ရာကို အများလည်း လက်ခံ လာနိုင်အောင်
သူ့ ဝိရိယ စွမ်းအားနဲ့ကြိုးစားပြခဲ့ တာပါ။ သူ့ ရဲ့ မှတ်တိုင်
တစ်ခု ကျန်နေခဲ့ အောင်လဲ လုပ်နိုင်ခဲ့ တယ်လေ။
ဒါကြောင့်မရမ်းတလင်းခြံ၊ အယူတော်မင်္ဂလာခြံ ဆိုတာ အခုချိန်
ထိ ကျန်ခဲ့ တာပေါ့ ။ ကျွန်တော့် အထင် သူက သိပ်စာဖတ်
အား ကောင်းခဲ့ တယ် လို့ ။
ခင်တဲ့...
Thae Pwint March 18, 2011 at 10:20 PM
ကိုချမ်းလင်းနေရေ.. ဆရာမင်းသိင်္ခ စာအုပ်တွေ စုထားပေးတာကျေးဇူးပါ
ငဇင် July 6, 2011 at 8:21 AM
အကိုရေ... တခုလောက် မသိလို့မေးချင်လို့ပါ...
ဆရာမင်းသိင်္ခရဲ့ "မင်းဘာသိလို့လဲ" စာအုပ်ရဲ့ ပထမပိုင်းက
ဘာစာအုပ်လဲ... ကျေးဇူးပြုပြီး သိချင်လို့ပါ...
Jimmy13 February 6, 2012 at 1:42 AM
သူတော်စင်မလေးပုဏရိကကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အရမ်းကို အားရကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဂျာစီကွေး February 12, 2012 at 6:38 AM
အခုလို အရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ၀တ္တူများကို စုစည်းဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် အကို့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
လူလေး February 29, 2012 at 10:04 PM
အခုလို အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားထားတဲကအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြကျွန်းသာပေါ်မှ မျောက်သုံးကောင် စာအုပ်လေးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဇေယျာအောင် March 14, 2012 at 10:58 PM
မနောကြာဖြူမဂ္ဂဇင်းမှာ.. စနေမောင်မောင်နှင့် မေးမနေနဲ့စိန်လိုက်... ဆိုတာ အခန်းဆက်ပါဖူးတယ်။ ပြီးအောင် မရေးဘဲကျန်ခဲ့တာလား..။ ဒါမှမဟုတ်... အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့..ဆက်မဖော်ပြဖြစ်တာလားဆိုတာ.မသိပါဘူး..။ အဲသည်စာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့လူ..ပြောပြစမ်းပါ..။ ရှိရင်လည်း မျှပေးပါ..။
let me read ....MA NU SAR RI . thanks......
Anonymous June 2, 2012 at 12:10 PM
အကိုရေ ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ မာလိန်မှူးထူးစိန် နဲ့ ပရောဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွား စာအုပ်နှစ်အုပ်တင်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ...site မှာမှရှာလို့မရလို့ပါ
Moe Ye June 24, 2012 at 12:34 AM
ဆရာမင်းသိင်္ခကို တချို့တွေက အမြင်မကြည်ကြဘူး ။ ဘာယောင်ယောင် ညာယောင်ယောင်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ ၀ီရိယကို အသိအမှတ်ပြုရလိမ့်မယ် ။သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာက နည်းတာမှ မဟုတ်ပဲ ။ သူ့စာအုပ်တွေကို ဘယ်လို အမျိုးအစားတေ၊ွပဲ သတ်မှတ်ပါစေ ။ ကျွန်တော် စာစဖတ်ဖြစ်တာ သူ့ရဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ စဖြစ်တာပဲ ။ နောက်မှသာ တခြားစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်သွားတာ ။ ဆရာဆုံးတုန်းက ထုတ်တဲ့ မနောမယဂျာနယ်ကို အိမ်မှာ အလျှုရှိတုန်းက စက္ကူစုတ်အနေနဲ့ သုံးလိုက်ကြတယ် ။ အရမ်းနှမြောတာပဲ ။
Timeline တစ်ခုအနေနဲ့ သိမ်းထား မလို့ဟာကို ။အခုထိ ကျွန်တော်တို့ သူ့ရဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်နေရတုန်းပဲ ။သူ့အတွေးတွေကို ဆင့်ပွားခံစားနေရတုန်းပဲ ။ကျေးဖူးတင်ပါတယ် ။ ပြန် share ပေးတဲ့ အတွက် ..... ။
Anonymous July 1, 2012 at 12:35 AM
မင်းသိင်္ခရဲ့ မာလိန်မှူးထူးစိန်ရယ် မနုစာရီရယ်လေး လိုချင်လို့ တင်ပေးပါဦးဗျာ
moezat August 14, 2012 at 11:26 PM
Witt Hmone September 21, 2012 at 4:54 AM
Blogger Phyo Min Soe November 1, 2012 at 5:46 AM
ဒါပေမဲ့အသစ်လေးတွေရှိသေးရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ် အမြဲအားပေးနေမဲ့........
ဆရာမင်းသိင်္ခင်္င်္ရဲ့ သေသောသူသည်သုသာန်သို့သွားသည်ဆိုတဲ့ စာအုပ်တင်ပေးပါခင်ဗျာ။
Unknown December 2, 2012 at 2:19 AM
ဆရာမင်းသိင်္ခ ကို ဘယ်သူက အပြစ်မြင်ချင်တာလဲ ဗျာ..။ တကယ်တော့ ဆရာကြီးဟာ စာဖတ်နာပြီး လောကကြီးကို အမှန်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူ့ဇာတ်ကောင်တွေကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်..။ ဆရာကြီးဟာ.. စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်းလဲ လေ့လာဖူးတယ်.. ဗေဒင်ကျမ်းတွေလည်းဖတ်ရှုကျက်မှတ်ဖူးတယ်..။ အတတ်ပညာကို မျိုးစုံနေအောင်တတ်ထားဖူးတဲ့ ယောက်ျားမြတ် တစ်ယောက်ပါပဲ ..။ ဂမ္ဘီရ ပညာ ခေတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ ဆိုတာ သူ့ ဇာတ်ကောင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ကို ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်..။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာလိုလို ညာလိုလို ပြောကြပေမယ့် ဆရာကြီးဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်ပုဂ`၈ိုလ်ကြီးပါဆိုပြီး.. မကြွေးကြော်ဖူးဘူး..။ လေးစားထိုက်တဲ့ ယောကျာ်းမြတ်ပါ ပဲ ..။
အခုလို စာအုပ်များကို ကြိုးစားပြီးရှာဖွေတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်..
ထပ်အကူညီတောင်းပါရစေနော်.. ညီမလိုချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှိလို့ပါ..
[ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ခေါင်းမြီးခြုံလုံပါ ၊ သေသောသူသည် သုဿန်သို့သွားသည် ၊ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ၊ ပြောထုံးဖြစ်အောင် ငနက်ခေါင် (ပ+ဒု) ၊ မင်းသိင်္ခ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မီးအိမ်လက်စွဲခရီးသည် ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဗိုက်ပူသူတော် (ပ+ဒု) ၊ မောင်မင်းကြီးသား မောင်မြဖေ (ပ+ဒု) ၊ မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား ၊ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်မြကြီး ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မိုက်ခဲကျောက်ပွင့် ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မိုးပေါ်မှာ ကြယ်တစ်လုံး ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘုမ္မာဝတီ အရှုပ်တော်ပုံ ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မြိုင်ရာဇာတာတေ ၊ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ၊ မင်းသိင်္ခ ဖီလိုဆိုဖာ ဦးမြသာ ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မြကျွန်းပေါ်ကမျောက်သုံးကောင် ( ပ+ဒု ) ၊ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် အမှတ် (၁+၂+၃+၄+၅) ၊ မင်းသိင်္ခ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် နှင့် မိန်းမလှကျွန်းအပါအ၀င် ၀တ္ထုတိုများ ၊ မင်းသိင်္ခ မဲခေါင်ကျော်စွာ ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့်ဖဲသုံးချပ်သမားအပါအ၀င် ၀တ္ထုတိုများ ]
ခင်များ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ရပြီလား။ ကျွန်တော်ရော လိုချင်လို့ပါ ။ reply လုပ်ပေးပါ။please
Unknown January 24, 2013 at 3:16 AM
အစ်ကိုရေ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်စာအုပ် လေးတွေ တင်ပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ ပြည်ပမှာ ဝယ်ရတာခက်လို့ပါနော် ။
မင်းသိင်္ခ ရဲ့သေသောသူသည် သုဿာန်သို့သွားသည် ဆိုသော စာအုပ်ရှိရင်လိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျား
Unknown August 5, 2014 at 1:29 AM
အစ်ကိုရေ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်စာအုပ် တွေရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးပါဦးအကို ကျေးဇူးပါ